Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpiasam-panjakana: Esorina amin’ny toerana izay tsy hanohana ny HVM
Mpiasam-panjakana: Esorina amin’ny toerana izay tsy hanohana ny HVM
Tsy misy zavatra mandeha intsony any amin’ny birao sy ministera rehetra any. Sady fampitandremana no fampihorohoroana no mitranga ankehitriny ho an’ireo tale sy tale jeneraly ary ireo sekretera jeneralin’ny ministera. Miompana amin’ny fifidianana filohan’ny repoblika amin’ny taona 2018 avokoa no baiko omen’ireo minisitra. Tsy ny lalàna mifehy ny asa sy ny fenitra ny fanatanterahana izany asa izany intsony no mibaiko ireo mpiasam-panjakana ambony amin’izao fotoana izao fa ny raharaha pôlitikan’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasaikara). Mandeha ny baiko ankehitriny hoy ity tale iray avy amin’ny ministera fa tsy maintsy omena vahana ireo olona mpomba ny antoko HVM izay tonga ao amin’ny ministera. Ireo filohan’ny fikambanana sy ny vondron’olona momba ny fanjakana hatrany no tsy maintsy atao izay hahazoany fahafaham-po. Matetika nefa dia zavatra mifanohitra tanteraka amin’ny lalànan’ny asa no angatahan’izy ireny. Dia voatery tsy maintsy manatanteraka ny filan’ireny olona ireny ny olona fehezin’ireo ministra ankehitriny. Raha toa ka tsy manatanteraka izany dia fandroahana ho hesorina amin’ny toerana no azo. Efa maro no nesorina hoy ihany ity tale izay mitaraina noho ny tsindry azony. Porofon’izany ny zava-nitranga teny amin’ny Antenimierandoholona. Santionany iray amin’ny endrika ny faneriterena sy ny fanaovana antsojay ny mpiasam-panjakana ambony ny zavatra nahazo an’Andriamatoa Rakotomanana Honoré izay filohan’ny Antenimieran-doholona. Sehatra roa samy hafa ny zava-misy nefa azo atao tsara ny mampitovy ny tranga mahazo ny roa tonta. Noho io raharaha io dia mikorontana ankehitriny ny tontolon’ny asa ka tsy hay izay hiafaran’izao. Tsy misy mandeha amin’ny laoniny intsony ny raharaha fa mpanatanteraka baiko fotsiny sisa no atao.
Manomboka izao dia mazava tsara ny raharaham-panjakana. Aompana amin’ny famerenana ny fanjakana HVM amin’ny toerana amin’ny taona 2018 hoy hatrany ilay tale no baiko. Misy ny voalaza mivantana ary misy ireo izay atao ankolaka ny fomba entina milaza izany. Voalazan’ity tale izay tafaresaka taminay ity fa tsy azo ialana ny fanompoana ny HVM raha toa ka mbola te hijanona amin’ny toerana. Mbola loza be noho ny nitranga tamin’ny fanjakana teo aloha ny iainana ankehitriny hoy ihany ny filazan’ity olona ity.